Hainahandro sy fikarakarana lakozia :: Hisy fampiofanana maimaimpoana momba ny fandrahoan-tsakafo etsy Andavamamba • AoRaha
Hainahandro sy fikarakarana lakozia Hisy fampiofanana maimaimpoana momba ny fandrahoan-tsakafo etsy Andavamamba
Sehatra natokana ho an’ny hainahandro sy ny manodidina ny lakozia ny hetsika “Salon de la Gastronomie”, izay hotontosaina etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba (AFT) amin’ny 27-29 septambra 2019. Mihoatra ny dimampolo ny isan’ny trano heva handravaka amin’io fampisehoana ara-tsakafo io amin’izao andiany fahaenina izao.
Matevina ny fandaharam-potoana mandritra ny telo andro hanaovana ny hetsika. Hisy ny varotra fampirantiana ireo karazan-tsakafo sy zava-pisotro ary kojakoja ilaina ao an-dakozia. Misongadina ihany koa ny fampianarana maimaimpoana momba fandrahoan-tsakafo sy ny fanamboarana mofomamy. Manampy ireo ny fampiofanana momba ny fanaingoana sakafo sy tsindrin-tsakafo amin’ny alalan’ny sôkôla, vatomamy… Hahazo tombony ireo mpitsidika ho avy eny an-toerana satria afaka manao andran-tsira amin’ireo karazan-tsakafo maro izy ireo.
Ankoatra izay, hisy ny kilalao sy fifaninanana isan-karazany mety hahazoana loka, toy ny tapalika hahafahana mividy entana mitentina roa hetsy ariary. Tsara ho fantatra fa hisy atrikasa arahina famelabelarana manodidina ny sakafo ho an’ireo liana te hiditra lalindalina amin’izany.
Famatsiana herinaratra – Andranobevava Lasibatry ny fitarazohan’ ny asan’ny Jirama ireo mpanjifa
Faritra tandindonin-doza Ahiana ny tondra-drano sy fihotsahan’ny tany
Fambolena Hiara-hiasa amin’ny arabo i Madagasikara
Voina an-dalambe Telo mianaka indray voadonan’ny fiara teny an-tsisin’arabe
Fanarahan-dia tany Betroka :: Dahalo iray maty voatifitra teny am-pandosirana
Fandosirana :: Maty voatifitra ny lehilahy iray